Ny Google Pixel 3 sy Pixel 3 XL sasany dia tsy mitahiry ireo sary nalainy | Androidsis
Na eo aza ny fitsapana marobe izay ataon'ireo mpanamboatra amin'ny terminal alohan'ny hahatongavany amin'ny tsena, tsy azo atao mihitsy ny maminavina ny fomba fitondrantenany rehefa manomboka mifandray aminy ny sarambabem-bahoaka. Tamin'ny taon-dasa, maro ny olana natolotry ny Google Pixel 2 sy ny Google Pixe 2 XL. Tamin'ity taona ity dia toa miverina ny tantara.
Andro vitsy lasa izay, nampahafantatra anao izahay ny amin'ireo olana ireo Google Pixel 3 XL multitasking, Ankoatr'izay olan'ny efijery sy mpandahateny izay natolotra ihany koa maodely sasany amin'ny andiany fahatelo amin'ny Google Pixel range. Ankehitriny dia anjaran'ny olana lehibe kokoa, ary izany dia arak'ireo mpampiasa maro, ny sary nalainy dia tsy tehirizina ao amin'ilay fitaovana.
Tamin'ny voalohany dia toa somary mampifanohitra ihany izany, fa raha raisintsika an-tsaina fa ny finday avo lenta no lasa fitaovana tokana ho an'ny mpampiasa maro raha ny amin'ny mitahiry ireo fotoana sarobidy indrindra, ny olana dia mety hiteraka aretin'andoha bebe kokoa, ary tsy ho an'ny mpampiasa ihany, fa ho an'ny Google ihany koa.
Araka ny hitantsika amin'ny kofehy Reddit isan-karazany, ny Google Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 2 ary Pixel 2 XL dia manana olana rehefa miresaka aMitahiry sary rehefa nalaina. Toa miseho io olana io rehefa maka sary ary mivadika fampiharana hafa haingana. Ny mpampiasa sasany dia milaza fa ny sary kely dia aseho ao amin'ny galeriany, fa rehefa manindry azy dia manjavona tanteraka avy eo amin'ny terminal.
Nilaza ny mpampiasa hafa fa tsy nipoitra teo amin'ny terminal-n'izy ireo ireo sary ireo, fa vao mainka Minitra vitsy aorian'ny namoronana azy ireo no ataon'izy ireo. Na inona na inona antony, mazava fa tsy afaka mampiseho an'ity karazana olana ity ny smartphone iray, mainka izany fa ny terminal an'ny Google, izay miandraikitra ny fampivelarana ny rafitra fiasa izay mitantana ny fantsony manokana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Ny Google Pixel 3 sy Pixel 3 XL sasany dia tsy mitahiry ireo sary nalainy
Ho tonga tsy ho ela ao amin'ny WhatsApp ny famerenana feo ny feo naoty mandeha ho azy